‘Ngizibona ngidlalela iBanyana Banyana’ | News24
‘Ngizibona ngidlalela iBanyana Banyana’
ISITHOMBE: SITHUNYELWE USnenhlanhla Shozi (kwesokudla) edlalela iqembu lebhola i-Shooting Stars
INTOMBAZANE enethalente lokudlala ibhola lezi nyawo, uSnenhlanhla “Sne” Shozi (18) waKwaNyuswa, ofunda eKloof High, uthe uthando lwakhe lokudlala ibhola lwaqala esemncane efundiswa abafowabo.
USnenhlanhla uthe: “Ngikhule ngilidlala ibhola nabafowethu, futhi ngangithanda ukuhamba nabo uma beyo qeqeshelwa lona,” kusho yena.
Kuningi akuzuzile ngokudlala ibhola kubalwa ukudlalela iqembu laseNingizimu Afrika ngaphansi kwesigaba saba neminyaka eyi-20.
Uthe: “Ngesikhathi ngifunda amabanga aphansi ngabalwa njengomdlali okora ama-goal amaningi, ngaba umdlali wonyaka eqenjini lase-Kloof High School. Ngakhethwa eqenjini lama ntombazane adlala ibhola lezi nyawo laKwaZulu-Natal ngaphansi kwesigaba saba neminyaka eyi-19 ngo-2013 no-2014. Ngathola umfundaze eKloof High School ngokudlalela i-Barcelona. Ngaqokelwa ukudlalela iqembu laseNingizimu Afrika ngaphansi kwesigaba saba neminyaka eyi-17 ngo-2013, eyi-19 ngo-2014, neyi-20 ngo-2015,” kusho yena.
Uqhube wathi ngaphandle kokudlala ibhola lezi nyawo uthanda ukudlala ibhola lombhoxo.
Uthe:“Ngithanda ukudlala ibhola lombhoxo, ukungenela imijaho, umdlalo owaziwa ngokuthi yi-Volleyball nokulalela umculo,” kusho yena.
Uthe eminyakeni emihlanu ezayo uzibona edlalela iqembu elikhulu le bhola elaziwa ngokuthi yiBanyana Banyana.
“Ibhola lezi nyawo ngilithanda ngendlela emangalisayo, yingakho ngizibona ngidlalela iBanyana Banyana. Uma sengiqedile umatikuletsheni, ngithanda ukwenza izifundo ze-Soccer Administration,”kusho yena.
Uthe njengoba kuqale ama holide ezikole kuningi okuse zinhlelweni zakhe.
Uthe: “Kulama holide ngizobe ngiye kwi-camp yeqembu le bhola lombhoxo laKwaZulu-Natal, bese ngilekelele iKloof Senior Primary ekuqeqesheni abafundi kwibhola lombhoxo abaneminyaka eyi-13 izinsuku ezintathu. Ngizoba yingxenye yemidlalo ezothatha izinsuku ezimbili exhaswe yiqembu lebhola i-Kaizer Chiefs kuzobe kukhona umdlali walo uSiboniso Gaxa,” kusho uSnenhlanhla.
Ugqugquzele amantombazane anothando lokudlala ibhola wathi: “Ibhola lezi nyawo umdlalo olula futhi omnandi, ugcina umzimba unempilo futhi uhlale unomdlandla, kodwa kumele uzimisele uma ufuna ukuba umdlali ohamba phambili, kubalulekile ukuthi ulalele umqeqeshi wakho ngaso sonke isikhathi. Kumele usebenze kanzima uma ufuna ukuphumelela empilweni futhi uma ufuna ukudlalela amaqembu aphambili. Kumele uqikelele ekuqeqeshweni kanzima, uhloniphe bese uzimisele,” kusho uSnenhlanhla.
UMnuz Lewis Donnelly wase-eKhaya Academy, ongumqeqeshi kaSnenhlanhla uthe: “USnenhlanhla ungumdlali osakhula futhi onethalente elimangalisayo, leli thalente liyisiphiwo sakhe futhi ulisebenzisa ngendlela eyiyo. USne wamukela amathuba awatholayo empilweni, yize eqhamuka endaweni yasemakhaya, kodwa engikuthandayo wukuthi ukwazile ukuba ngumfundi ohamba phambili esikoleni sase-Kloof,”
“Ithalente lika Sne ngilibona likhula ngamandla futhi ungumfundi onenhlonipho ophuma ekhaya elifundisekile, ngibona enekusasa eliqhakazile. USne uyazimisela kukona konke akwenzayo siyamulekelela ekutheni akwazi ukumelana nezifundo zakhe nebhola lezi nyawo.”
Uqhube wathi kuningi asekuzuzile uSne kuwo umdlalo webhola lezi nyawo okusho khona ukuthi yisiphiwo sakhe lesi. “Sizo qhubeka nokumlekelela ukuze afinyelele ekufezeni amaphupho akhe okudlalela iqembu elikhulu.
Mina njengo mqeqeshi wakhe ngiyakuthokozela ukuqeqesha umdlali onjengo Sne, ngoba ungumdlali ophambili kubadlali baKwaZulu-Natal kulabo abaneminyaka engange yakhe. USne uyisibusiso esikoleni iKloof High,” kusho uMnuz Donnelly